Kaaliyihi Hore Ee Madaxweyne Donald Trump Oo Diiday Inuu Ruushka U Basaasay – somalilandtoday.com
Kaaliyihi Hore Ee Madaxweyne Donald Trump Oo Diiday Inuu Ruushka U Basaasay
(SLT-Washington)-Mid ka mid ah kaaliyihi hore ee siyasadda arrimaha dibadda ee Donald Trump ayaa sheegay eedda loo soo jeediyey ee ku saabsan inuu dowladda Ruushka inuu 2016-ka uu la shaqeeyey ay tahay “marin habaabin”
FBI waxay aaminsantahay in Carter Page uu wakhtigaa “iskaashi iyo la talinba” uu la lahaa dowladda Ruushka.
Maxkamadda ayaa waxaa awood loo siiyey iney arrintooda baarto arrimaha la xidhiidha sirdoonka dibadda ee hay’adaha ama shaqsiyaadska ay geystaan, maxkamadda oo ah mid si weyn looga aqoonsan yahay dalka Mareykanka.
FBI ayaa sii daaysay dukumiinti hore oo qarsoodi ah habeenkii sabtida kaddib markii ay soo codsiyo ku saabsan xorriyadda xogta oo ay soo diyaariyeen dhawr hay’adood oo Maraykan ah.
Sida ku cad codsiga bisha October ee 2016-ka, “FBI waxay aaminsan tahay Carter inuu iskaashi iyo macaamilba uu la lahaa Ruushka”.
Waxaa kale oo uu dukumantigu sheegayaa inuu Mr Page, “uu xiriir toos ah uu la sameeyey saraakiisha dowladda Ruushka, oo ay ka mid yihiin Saraakiisha sirdoonka dalkaasi.”
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionMadaxweynaha Mareykanka Donald Trump
Mr Page oo CNN u warramay ayaa warka sheegaya inuu dowladda ruushka uu xidhiidh la talin la lahaa ku tilmaamay “arrin ay waxba ka jirin”.
“Anigu weligeey cid shisheeya ah wakiil uma noqon wararka la isla dhex marayana waa khiyaali aan waxba ka jirin ayuu yiri.
“Waxaad ka hadli kartaa marin hababin maxkamadeed, taa lafteeda ayaaba marin habaabin ah. taa micnaheeduna waa wax runti lagu qoslo.
Ma la weydiiyey faallooyinkiisi hore iney tilmaan u yihiin inuu la taliye aan rasmi ahayn uu kirimlin u ahaa? Mr page oo ka jawaabaya ayaa waxuu yiri “anigu waajibaadkeyga ayaa waxay ahayd inaan dadka xiriir aan toos ahayn la sameeyo taasina ma aha mid caddeeyn u noqon karta ama sii xoojineyso dokumantiga marin habaabinta ah ee la iga soo saaray..